ए.पि.एफ लाई प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधी - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २६, २०७३ समय: ७:३७:१८
२६ फागुन, इटहरी। सुनसरीको इटहरीमा गत फागुन २० गते वाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज सम्पन्न भएको छ । हिजो भएको फाइनल खेलमा सुदुर पश्चिमाञ्चललाई ८ विकेटले हराउदै ए.पि.एफ.ले उपाधीमाथी कब्जा जमाएको छ । टस जितेर पहिलो ब्याटिङ्ग गरेको सुदुरपश्चिमाञ्चलले २० ओभर खेल्दै ७ विकेटको नोक्सानी ५७ रनमात्र बनाउन सक्यो ।
सुदुर पश्चिमाञ्चलको लागि सम्झना खड्काले १६ बाहेक अरु कसैले दोहोरो अंक बनाउन सकेनन् । ए.पि.एफ.को लागि रितृ कनजियाले ३ र सीता राना मगरले १ विकेट लिएका थिए । जवाफि ब्याटिङ्गमा आएको ए.पि.एफले १४.१ ओभरमा २ विकेटको नोक्सानीमो विजय लक्ष्य पुरा गुरेको थियो । ए.पि.एफ.को लागि सीता रानामगरले १६ सरिता मगरले २२ रन बनाएका छन् । सुदुर पश्चिमाञ्चलको लागि रेखा रावतले १ विकेट लिईन । खेलको प्लेयर अफ द फाइनल र प्रतियोगिताको बेष्ट बलर ए.पि.एफ.की रितृ कनजिया भईन उनले नगद रु. ५,००० संगै ट्रफि पाइन त्यसैगरी प्रतियोगिताको बेष्ट ब्याट्स युमन सुदुर पश्चिमाञ्चलकी रेखा रावत घोषित पाइन उनले पनि रु. ५,००० संगै ट्रफि पाइन । त्यस्तै प्रतियोगिताकै प्लेयर अफ द सिरिजको रुपमा नगद रु. १०,००० सहित ट्रफि ए.पि.एफ. की सीता रानामगरले पाइन ।
बिजेता ए.पि.एफले ट्रफि सहित रु. १,००,००० र उपबिजेता सुदुर पश्चिमाञ्चलले ट्रफि सहित नगद रु. ५०,००० प्राप्त ग¥यो बिजेता र उपविजेता टिमहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्री केशवकुमार बिष्ट तथा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका सदस्य गणेश बुढाथोकी,नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष कमलेश पौडेल, प्याब्सन सुनसरी अध्यक्ष सुमित थापा, हिसान सुनसरी अध्यक्ष मुकुन्द्र घिमिरे र उद्योग बाणिज्य.संघ इटहरी का बरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेश बिष्ट लगायतल अतिथिहरुले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको छ ।